E-စက်ဘီးပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ 10 နည်းလမ်းများ - တရုတ် Jinhua နှစျသိမျ့ယာဉ်
လျှပ်စစ် Mobiliy စကူတာ
700C ဥရောပ E-စက်ဘီး
E-စက်ဘီးပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ 10 နည်းလမ်းများ
သင်ပိုက်ဆံဖြုန်းအကြောင်းကိုသေချာ E-ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူသော်လည်းမစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, ဤဆောင်းပါးကိုသင်သည်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ရေးဆွဲကူညီပေလိမ့်မည်။ သင်ကသုံးလျှင် E-စက်ဘီးအမှန်တကယ်ကိုသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာသူ့ဟာသူများအတွက်ပေးဆောင်နိုင်ပါ။ Comfortebike.com လျှပ်စစ်စက်ဘီးကိုသင်ထွက်နှင့်ယနေ့ E-ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူများ၏စမတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားမျှတကူညီရန်, သင်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ 10 နည်းလမ်းတွေများစာရင်းကိုပြုစုခဲ့သည်။ အတိအကျဒေါ်လာစျေးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သည်ဒီမှာဟင်း Calculator ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုကယျတငျနိုငျပမာဏသည်။ မသာသင်ပတ်ဝန်းကျင် (တဦးတည်းလျော့နည်းကားတစ်စီး) အတွက်တစ်ခုခုလုပ်နေပါလိမ့်မည်သို့သော်သင်ကိုယ်သင်နှင့်သင့်ဘဏ္ဍာရေးအနာဂတျအတှကျတစ်ခုခုလုပ်နေပါလိမ့်မည်။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူဒီနေရာမှာ ... စမတ်ပိုက်ဆံသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်:
... ..This တဦးတည်းသိသာဖြစ်ပါတယ် 1. ဓါတ်ငွေ့ပိုက်ဆံ။ ကိုယ်ကသာ 20 မိုင်အထိသင်ရနိုင်သည့် e-စက်ဘီးဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့ဆင့်၏စုံတွဲတစ်တွဲကုန်ကျသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလင်းအလေးချိန်နှင့်အကျိုးရှိစွာလျှပ်စစ်မော်တာတစ်ခုလျှပ်စစ်စက်ဘီးပင်အထိရောက်ဆုံးကားများထက်အများကြီးပို efficent ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းများနှုန်းကိုမြင့်တက်-up, နောက်တဖန်သင်သည်အဘယ်အရာကိုထင်ပါသလဲဓာတ်ငွေ့မည်!
2. ကားအစားထိုး ... .owning ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကားများလောင်စာဆီစျေးနှုန်းဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအာမခံ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်သိုလှောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်သာစျေးကြီးသည်။ သင်သည်သင်၏အသစ်သောလျှပ်စစ်စက်ဘီးများအတွက်ကုန်သွယ်မှုအတွက်တဦးတည်းမော်တော်ကားဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်လျှင်, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌ဆိုင်ကယ်များအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တပြင်လုံးကို "တဦးတည်းလျော့နည်းကားတစ်စီး" အရာတွေနဲ့ E-စက်ဘီးသူရဲကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ PLUS, သငျသညျစောငျ့ရှောကျကားကိုအများကြီးပိုရှည်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။
3. အချိန်သိမ်းဆည်းခြင်း ... သင်အသွားအလာ, ယာဉ်ရပ်နား, စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ, တစ်ဦးကြီးတွေမြို့အတွက် E-စက်ဘီးကားတစ်စီးထက်ပညာနှင့်လမ်းလျှောက်ထက်ပုံစံလုပ်ရန်ပိုမိုထိရောက်သောပိုပြီး effiicent အချိန်ရှိနိုင်ပါသည်။ အချိန်ကငွေဖြစ်ပါသည်။
4. ကားရပ်ရန်နှင့်ဖြတ်သန်းခ ... E-စက်ဘီးရုံစက်ဘီးကဲ့သို့မည်သည့် post မှသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးလိုပဲ, သူတို့တံတားများသို့မဟုတ် autoways အပေါ်ဖြတ်သန်းခပေးချေရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်: အာမခံသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ။
5. စျေးပေါတဲ့အပန်းဖြေ ... .electric စက်ဘီးစီးတဲ့ပေါက်ကွဲမှုများမှာ! သငျသညျအစား, motorycles စီးနင်း skydiving, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်သွားတူသောအကုန်အကျဖျော်ဖြေရေးအချို့နဲ့အခြားပုံစံလုပ်နေတာသင့်ရဲ့ e-စက်ဘီးစီးပါလျှင် ... သင်ကပိုက်ဆံချွေတာကြပါတယ်။
အိမ်သူအိမ်သားအနီးမှာ 6. အားလပ်ရက် ... သငျသညျ, E-စက်ဘီးတစ်စင်းကိုရှိပါက, သင်သည်သင်၏နေအိမ်အနီးရှိတစ်နေ့ခရီးစဉ်ပေါ်တွင်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူအားလပ်ရက်လုပ်နိုင်အစား Adventures ကိုရှာဖွေဝေးသွားဖို့ရှိခြင်း၏။
7. ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ် ... တချို့လူတွေကသင်ထွက်သွားကြနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏစီးဖို့ပိုများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ E-စက်ဘီးအမှန်တကယ်ပုံမှန်ဆိုင်ကယ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ ထွက်ရယူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကောင်းသင်တို့အဘို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များ, အသက်ရှင်ခြင်း၏အရှည်နှင့်အတူရေရှည်၌သင်တို့ကိုငွေအများကြီးကယ်တင်မည်, etc
8. အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သငျသညျဆိုပါက ... E-စက်ဘီးသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရပါတယ် အလွန်ကြီးစွာသောဘေးဥပဒ်ကို (ပိတျဆို့နတေဲ့ကားလမ်းစသည်တို့) ၏အမှု၌အစာရှောင်မြို့ထဲကရဖို့လိုအပ်ပါတယ် ... ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကားကိုဖြိုဖျက်မှု၌ရှိသည်ဖို့လည်းကောင်းလှ၏။
9. 9. စျေးပေါတဲ့နေ့စွဲများ ... နှစ်ခုပါ E-စက်ဘီးရှိခြင်းသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေတာနဲ့သင့်ရဲ့ဘဏ်ကိုချိုးဖောက်မပါဘဲသူမ၏ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
10. ကုန်စုံဆိုင်များဆွဲယူအစားထဲကအစာစားခြင်း - တစ်ဦးက e-စက်ဘီးပြီးပြည့်စုံကုန်စုံ getter စေသည်, သင်ရုံအခါတိုင်းသင့်ရဲ့ e-ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်သင်အစားအသောက်ဆိုင်ရဖို့ရွေးချယ် အကယ်. ညာဘက်စသည်တို့ကိုကားပါကင်မရှိလုပ်ရတဲ့အတူစတိုးဆိုင်မှတက်ဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ် ထွက်. ထွက်စားရန်အနေနဲ့တိုက်တွန်းရှိသည်, သငျသညျအစာရှောငျပိုက်ဆံကယ်တင်မည်။
Post time: Feb-26-2016
No.588 huatai လမ်း, jinhua မြို့, Zhejiang